VACC150 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
စံချိန်စံညွှန်း -ISO 9001:2015
မ်ာဒယ်- VACC 150
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC150
Always improving and updating the latest technologies of purified water filtration, Viet An has been distributing hundreds of VACC150 Purified water filtration system with composite blocking valve filter cartridge every year.
နောက်ဆုံးပေါ် ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး Viet An မှ နှစ်စဉ် အစို့ပါတဲ့ VACC150 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ် ရာချီပြီး ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။
Members of Viet An Company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ
Withavariety of outstanding advantages compared to other products in the market, this industrial filtration machine is increasingly trusted by the customers in Vietnam as well as other countries in the region. Do you want to know why it is so popular? What are the benefits for you? Let’s learn more with the below article.
ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားစက်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုပြီးထူးချွန်တဲ့ ကောင်းကွက်တွေ အများကြီးရှိနေတာကြောင့် ဒီစက်ရုံသုံး ရေစစ်ထုတ်တဲ့ စက်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် အခြားန်ိုင်ငံများမှ ၀ယ်ယူသူတွေက ယုံကြည်စွာ ၀ယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ဘာလို့နာမည်ကြီးတာလဲ သင်သိချင်ပါသလား? သင့်အတွက် အကျိုးအမြတ်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? အောက်က ဆောင်းပါးမှာ စက်ရဲ့ အကြောင်းကို ပိုသိအောင် လေ့လာကြည့်ကြစို့။
VACC150 150l/h Purified water filtration system
VACC150 တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်း စနစ်
VACC150 150l/h Purified water filtration system is installed and strictly controlled according to ISO 9001:2015 standard. It has been recognized bottled water filtration line exclusive brand names of VA, USApec No. 250969 , and No. 250970 by the National Office Of Intellectual Property Of Vietnam.
VACC150 တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်း စနစ်ကို ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ကို ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတော် မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ UA,USApec စတဲ့ တံဆိပ်တွေနဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေအတွက် ရေစစ်ထုတ်သော လိုင်း မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ နဲ့ ၂၅၀၉၇၀ အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုထားပါတယ်။
In addition to this product, you can also find many other products suitable for production of mineral water, electrolyte water with full capacity. If you are interested, please go to https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc for more information
ဒီစက်အပြင် အခြားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့ ရေသန့်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အချက်အလက်တွေ ပိုမိုသိရှိအောင် https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
All our products are imported from the most advanced countries such as the UK, America, Japan, Korea, etc. and assembled at our largest factory with an area of more than 10,000 square meters in Quang Minh industrial park - Me Linh- Hanoi by our experienced and dedicated engineering team. This water filtration product applies the most advanced quality in the market currently. Now we are distributing the products nationwide through our branches in Hanoi-Ho Chi Minh - Hue - Danang - Buon Ma Thuot and exporting to Asian countries.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို UK အမေရိကန် ဂျပန် ကိုရီးယား စတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ တင်ပို့ထားတာဖြစ်ပြီး Quang Minh စက်မှုဇုန်- Me Linh- Hanoi မှာရှိတဲ့ မြေဧက ၁၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျော် အကျယ်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး စက်ရုံကြီးမှာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ထူးချွန်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ တပ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ယနေ့ခေတ် ဈေးကွက်မှာရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး အရည်အသွေးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ယခုအခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ကုန်ပစ္စည်းတွေကို Hanoi-Ho Chi Minh - Hue - Danang - Buon Ma Thuot တို့မှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲတွေကနေတဆင့် နိုင်ငံအနှံ့ကို ဖြန့်ချီပြီး အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့နေပါတယ်။
What is the distinction of Viet An’s VACC150 Purified water filtration system?
Viet An ရဲ့ VACC150 ရေသန့်စစ်ထုတ်သောစနစ်ရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘာလဲ?
1. Apply the most advanced water filtration technology of the United States
၁။ US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး ရေစစ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်း
Produced underaclosed and automatic production process, the VACC150 150LPH model brings the best quality of the water, meeting QCVN 6-1: 2010/BYT standard of the Ministry of Health on food hygiene and safety and the FDA Standard of the United States. Thus, it is qualified for export to the ASEAN countries.
Currently, VACC150 Purified water filtration system is applying two water purification technology, including RO and nanoe to match customers’ diverse demands.
အော်တိုထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် VACC150 150LPH မော်ဒယ်က အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးဖြစ်ပြီး အစားအသောက်လုံခြုံမှုအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1: 2010/BYT စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီပြီး US ရဲ့ FDA နဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်က အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ဖို့ အရည်အသွေးပြည့်မီပါတယ်။
ယခုအခါမှာ VACC150 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်တွင် ဝယ်ယူသူတွေအကြိုက်တွေ့စေဖို့ RO နဲ့ nanoe အပါအ၀င် ရေသန့်စင်တဲ့ နည်းပညာနှစ်ခုကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
2. Safety filter components of high durability
၂။ကြာရှည်ခံပြီး လုံခြုံသော ရေစစ်ထုတ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ
during pumping the water from the source to the filter tank.
တွန်းပေးတဲ့ ရေစုပ်စက်ကို အီတလီရဲ့ နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်က ရေတွေကို အရင်းအမြစ်ကနေ ရေစစ်တဲ့ တိုင်ကီဆီသို့ စုပ်တင်တဲ့အခါမှာ ဖိအားမြင့်မြင့်နဲ့ လည်ပတ်ပါတယ်။
The filter cartridge and filter housing are imported from America, ensuring high quality and durability.
စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အတောင့်နဲ့ အိမ်ကို အမေရိကန်ကနေ တင်သွင်းထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။
The membrane and membrane housing are also manufactured according to American technology with high-quality standards along with the exceptional ability to remove impurities.
အလွှာပါးနဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်း အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အတူ အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အရည်အသွေးကတော့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
The filter tank is made from ABS resin with high durability and good performance in both salty and sweet water. Therefore, this model is specifically suitable for households and business establishments in the coastal area. With this water filtration system, it is also very easy to clean the machine.
စစ်ထုတ်ကိရိယာ တိုင်ကီကို ရေငန်ရေချို နှစ်မျိူးလုံးမှာ လုပ်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ ABS အစေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမော်ဒယ်က ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာ အိမ်သုံး စက်ရုံသုံးအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီရေစစ်ထုတ်တဲ့ စနစ်နဲ့ဆိုရင် စက်ကို သန့်ရှင်းဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
The mechanical valve system mounted on the filter tank is manufactured according to American technology. It can rotate in3directions to clean the filter tank quickly and easily. This mechanical valve will help to save more cost than an automatic valve.
ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်က စစ်ထုတ်ကိရိယာ တိုင်ကီကို မြန်မြန်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ သန့်ရှင်းပေးဖို့ ဦးတည်ရာ ၃ ခုကို လှည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်သုံးအဆို့က အော်တိုအဆို့ထက် အကုန်အကျများကို ပိုပြီး ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
There isasmart control panel to automatically stop in case of abnormal incidents. This isadifferent feature of this model.
မူမမှန်မှုဖြစ်တဲ့အခါ အော်တိုရပ်သွားတဲ့ စမတ်ကျတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင်ပါရှိပါတယ်။ ဒါက ဒီမော်ဒယ်ရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Double sterilization
Unlike other water filtration products, this VACC150 system utilizesadouble sterilization method with Ultraviolet (UV) light of Hungary technology to ensure the absolute purity of the water.
အခြား ရေစစ်ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ မတူဘဲ VACC150 စနစ်က ရေရဲ့ သန့်ရှင်းမှုကို လုံးဝသေချာစေဖို့ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် နည်းပညာနဲ့အတူ နှစ်ဆပိုးသတ်ခြင်းနည်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
4. Quick filtration process, meeting quality standards
၄။ အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လျင်မြန်သော စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
VACC150 model is capable of filtering 150 liters of water per hour. All the finished products all meet quality standards of pure drinking water stipulated by the Ministry of Health.
VACC 150 မော်ဒယ်က တစ်နာရီမှာ ၁၅၀ လီတာ ရေစစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ပြီးတဲ့ ရေတွေက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရေသန့်ကွာလတီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ ကိုက်ညီပါတယ်။
Why should use VACC150 Purified water filtration system of Viet An?
Viet An မှ VACC 150 ရေသန့်စစ်ထုတ်သောစနစ်ကို ဘာကြောင့် သုံးသင့်တာလဲ?
With its compact and advanced design, the product offersaquick filtration process with space-saving.
ဒီစက်ရဲ့ သိပ်သည်းပြီး ခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် နေရာကို ချွေတာနိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
The water filtration process is totally closed and automatic.
ရေစစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်က ကန့်သတ်ထားပြီး လုံးဝကို အော်တိုဖြစ်ပါတယ်။
It helps to provide the customers with clean and safe water for daily demands.
ဒီစက်က ၀ယ်ယူသူတွေရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေအတွက် သန့်ရှင်းပြီး လုံခြုံတဲ့ရေရရှိဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
The finished products satisfy QCVN 6-1: 2010/BYT standard of the Ministry of Health.
ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1: 2010/BYT စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Just turn3valves attached on the filter tanks, the filtration process will be started,
VACC150 model has high durability of up to more than 10 years.
အစို့ ၃ ခုကို တိုင်ကီမှာ တပ်လိုက်တာနဲ့ စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းက စတင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Call us at 0949 41.41.41 if you need to have your water filtration equipment maintained. Our engineering teams are always ready to serve you.
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ ရေစစ်ထုတ်တဲ့စက်က ပြုပြင်စရာလိုအပ်နေလျှင် ၀၉-၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ။
Vietnam An- supplier of the most modern machinery. Totally free shipping and installation Long-term warranty and maintenance. You will own genuine filtration equipment at reasonable prices at your replacement. Read more here: https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/day-chuyen-loc-nuoc/
Vietnam An-ခေတ်အမီဆုံးစက်တွေ ပေးပို့သူ။ လုံးဝအခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး တပ်ဆင်ပေးသည်။ နှစ်ရှည်အာမခံနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု။ စစ်မှန်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ စစ်ထုတ်ပေးတဲ့စက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိဖို့ https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
Once you have decided to choose this VACC150 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
1 Push pump တွန်းအားပါသောရေစုပ်စက် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
2 20” PP Filter Cartridge 20” PP စစ်ထုတ်ကိရိယာ အတောင့် 1 pc VA/ USApec
3 20” Filter housing 20” PP စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
4 20” PP Filter Cartridge 20” PP စစ်ထုတ်ကိရိယာ အတောင့် 1 pc VA/ USApec
5 20” Filter housing 20” PP စစ်ထုတ်ကိရိယာ အိမ် 1 pc VA/ USApec
6 20” CTO Filter Cartridge 20” CTO စစ်ထုတ်ကိရိယာ အတောင့် 1 pc VA/ USApec
7 20” Filter housing 20” PP စစ်ထုတ်ကိရိယာ အိမ် 1 pc VA/ USApec
8 304 stainless steel membrane housing 304 စတိန်းလက်စ်စတီး အလွှာပါးအိမ် 1 pc VA/ USApec
9 RO 4021 membrane RO 4021 အလွှာပါး 1 pc Hitech-USA/CSM Korea
10 VA5G Flowmeter VAG5 စီးဆင်းခြင်းမီတာ 1 pc Taiwan
11 Pressure gauge ဖိအား အတိုင်းအတာ2pc Taiwan
12 Electrical system လျှပ်စစ်ပိုင်းစနစ် 1 set LK Korea
13 PPR pipe and accessories PPR ပိုက်နှင့် အဆင်တဆာများ 1 set Vietnam
14 Stainless steel frame စတိန်းလက်စ်စတီးဖရိန် 1 set Vietnam
Hỏi đáp & đánh giá VACC 150 150LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်